UltimateWM, VTWM, Wayland, Wingo, WM2: WM ọzọ 5 maka Linux | Site na Linux
Taa, anyị ga n'ihu nke itolu na penultimate na Njikwa Window (Windows Managers - WM, na Bekee), ebe anyị ga-enyocha ihe ndị a 5, site na ndepụta anyị 50 a tụlere na mbụ.
PlayWM, Qtile, Ratpoison, Sawfish na Spectrwm
Steamcompmgr, StumpWM, Sugar, SwayWM na TWM
“WM ohuru nke n’atụ anya ịbụ GUI zuru oke n’ọdịnihu, ọ bụ ya mere eji akpọ ya ugbu a Unix Desktop Environment Project (UDE). Ihe oru ngo a adighi eji ulo akwukwo GUI puru iche dika QT ma obu GTK +. Ọ na-eji ụkpụrụ Xlibs eme ihe, iji mee ka ọ dị ngwa, ọkụ ma zere ịdabere na ya. UltimateWM ma ọ bụ UDE nwere ezigbo anya Look'n'Feel, ọ bụghị naanị akwụkwọ ọzọ nke njikwa njirimara windo a maara nke ọma "kpochapụwo".".
Agaghị arụ ọrụ: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ n’ihe dị ka afọ 6 gara aga.
O nyere ojiji kachasị nke oghere ihuenyo, nkwụsi ike, na ojiji ojiji dị ala.
Ezubere ya ka ejiri ya rụọ ọrụ nke ọma mgbe obere oge mmụta.
O nweghi ogwe oru ma obu desktọọpụ ma ọ bụ otu ihe. Na windo enweghị windo aha ya mere na enweghị bọtịnụ imechi, gbanwee, akara ngosi, ma ọ bụ bulie windo n'ọnụ ọnụ windo ndị ahụ. Ejiri ihe a na-akpọ hexagonal ma ọ bụ mmanụ a honeyụ nke gbanwere bọtịnụ ndị a gosipụtara mgbe onye ọrụ ahụ pịrị na nsọtụ windo ahụ.
Mmekọrịta onye ọrụ na-arụ ọrụ kpamkpam site na iji bọtịnụ òké dị iche iche na windo windo na desktọọpụ, n'ihi nke ahụ, iji rụọ ọrụ nke UDE ga-ekwe omume site na iji mkpọchi bọtịnụ atọ, ebe ọ bụ naanị na ọ na-enye nkwado dị oke mkpa maka ụzọ mkpirisi keyboard.
Maka nbudata na ntinye ma ọ bụ karịa ozi, enyere ihe ndị a aka njikọ. Nke ọzọ njikọ Ọ bụrụ na ọ dị mkpa
“A Mfe na oru oma Ohere Window Manager maka X Ohere System".
Agaghị arụ ọrụ: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ karịa afọ 5 gara aga.
O nyere ogwe aha, windo nwere ụdị, ụdị dị iche iche nke njikwa akara ngosi, ọrụ ndị akọwapụtara onye ọrụ, ntinye ederede na-pointer na-elekwasị anya, na igodo akọwapụtara onye ọrụ na ihe ntinye bọtịnụ.
A na-eme ya ugboro ugboro na mgbada dị ka onye ahịa ikpeazụ na-ebu, yabụ na mgbe e mere ya n'ụzọ ahụ, mgbe ị na-apụ ya, a ga-akwụsị nnọkọ onye ọrụ.
Site na ndabara, ọ na-enye windo ngwa ngwa nke gbara ókèala ya na mmanya aha ya n'elu. Ogwe Mbụ nke nwere aha windo ahụ, mpaghara akụkụ anọ na-egosi mgbe windo ahụ na-enweta ntinye keyboard, na igbe ọrụ atọ a maara dị ka "bọtịnụ mmanya aha."
Pị bọtịnụ na ogwe aha ya na akụ ala na ya welitere menu na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ enwere ike itinye na windo ahụ.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu "vtwm"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ ma ọ bụ nke ọzọ njikọ.
“Ihe zuru ezu ma sie ike Window Manager na-andiwet chere dị ka oge a, magburu onwe ya ma dị mfe nnọchi maka Linux X Server, Ya mere, mfe ịzụlite na ịnọgide na-enwe. Ya mere, a na-atụ anya na gburugburu Desktọpụ siri ike, dịka GNOME na KDE, ga-etinye ya n'ọrụ n'ụzọ zuru oke na n'ụzọ doro anya na naanị n'ọdịnihu dị nso ".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ihe gara aga n’obere otu ọnwa gara aga.
Ọ na-enye mkpochapu ọtụtụ eziokwu dị mgbagwoju anya iji nye ọrụ dị mfe karị. Ọ na-arụ ọrụ site na ime ka nchịkọta eserese dị mfe. Nke kpatara ya, ọ na-ejikwa ọrụ mejupụtara n'onwe ya.
Na isi ya ọ bụ usoro iwu maka onye na-ede egwú ịgwa ndị ahịa ha okwu yana mmejuputa ụlọ akwụkwọ C nke usoro ahụ. Onye na-ede ihe nwere ike ịbụ ihe nkesa ngosi na-agba ọsọ na Linux kernel na ngwaọrụ ntinye evdev, ngwa X, ma ọ bụ onye ahịa Wayland n'onwe ya.
Ọ na-enyekwa ntụnye ntụzịaka Weston n'ime arụmọrụ ya dịka onye na-ede egwu. Weston nwere ike ịrụ ọrụ dị ka onye ahịa X ma ọ bụ n'okpuru Linux KMS na ụgbọ mmiri ya na ụfọdụ ndị ahịa ngosi. Onye na-ede akwụkwọ Weston bụ onye na-ede akwụkwọ ntakịrị na ngwa ngwa ma dabara adaba maka ọtụtụ mkpanaka na ntinye aka.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu "xwayland"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
"Onye njikwa windo edepụtara kpamkpam n'asụsụ mmemme mmemme Go".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ karịa afọ 2 gara aga.
O nwere ihe ndabere ya niile, site na nkwukọrịta na X ruo ịde ederede na windo, edere na Go. Ọzọkwa, ọ na-abụkarị ICCCM na EWMH dakọtara.
O nwere njirimara abụọ nke, mgbe ejikọtara ya, mee ka ọ dị iche na ndị njikwa windo ndị ọzọ: Nkwado maka atumatu ntinye windo, dakọtara na Tiling na Stacking WM. Otu ojiji nke oghere ọrụ kwa ihe nlele, na-enye onye nlele ọ bụla ohere igosipụta ebe ọrụ ya, na-anọghị na ndị nlele ndị ọzọ.
Ọ bụ nnọọ configurable. Nke a na-agụnye ijikọ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke iwu iji pịa ma ọ bụ igwe nrụaka, ịchọ mma windo, na ịtọ nko na ọkụ dabere na ọnọdụ egwuregwu. A na-eme nhazi niile site na iji usoro faịlụ INI na nkwado maka ngbanwe agbanwe agbanwe. Enweghị ojiji nke faịlụ XML, ọ nweghị ihe ọ bụla ga-eweghachi ma ọ nweghị ederede e ji.
Maka nbudata na ntinye ma ọ bụ karịa ozi, enyere ihe ndị a aka njikọ.
“A nnọọ minimalist Ohere Manager maka X Ohere System".
Agaghị arụ ọrụ: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ n’ihe dị ka ntakịrị afọ 9 gara aga.
O nyere ikike megharia windo n’akuku ihuenyo, megharia windo ma uzo ma zoro ezo, zoo windo, weghachite windo zoro ezo, ma hichapụ windo.
O nyere nhazi ọ bụla mara mma na windo ọ bụla a na-achịkwa, ma ọ nyeghị akara ngosi, nhazi, desktọọpụ arụmọrụ, menus mgbọrọgwụ mgbatị, na ogwe ngwaọrụ, n'etiti ihe ndị ọzọ.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu "wm2"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
Cheta na: Cheta inyocha ndị ọrụ gọọmentị weebụsaịtị nke WM ọ bụla iji mara otu ha si bụrụ otu, ebe ọ bụ na, na nke ọ bụla, enwere nseta ihuenyo niile emelitere banyere ọdịdị ha.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ndị a na-esote 5 «Gestores de Ventanas», n'adabereghị na nke ọ bụla «Entorno de Escritorio», akpọ UltimateWM, VTWM, Wayland, Wingo, WM2, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » UltimateWM, VTWM, Wayland, Wingo, WM2: WM ọzọ 5 maka Linux
E kwuwela ọkwa nke Gnome 3.38 ma ndị a bụ akụkọ ya